Pier Auge Regenerating Smoothing Treatment LE SOIN TEINTE | Buy online | SHOP.COM.MM
Pier Auge Regenerating Smoothing Treatment LE SOIN TEINTE
By Pier Auge
Vitamin A,E, C & B5, Hyaluronic Acid, Hyper-protein နှင့် tensor effect တို့ပါဝင်ခြင်း
အသက် ၃၀ မှ ၅၀ အထိအသက်အရွယ်များအတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားခြင်း
စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အရေပြားနွမ်းနယ်မှုကို ပျောက်ကင်းစေခြင်း
ညှို့ဓာတ်ပြင်းသော အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိစေနိုင်ခြင်း
Sold by Min Nwel Trading Co. Ltd
The Best Treatment for me.
မျက်နှာအရေးကြောင်းတွေတော်တော်များလာလို့ ဒါလေးဝယ်သုံးကြည့်တာ။ ၂ ပတ်နေတော့ သိသိသာသာပြောင်းလဲလာလို့အဆင်ပြေပါတယ်။ Read more Hide
LE SOIN PRODUCTS တွေက ပေးရတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ ပြန်ရတဲ့ quality တန်ပါတယ်။ ကိုယ်တွေလို ၃၀ ကျော်အမျိုးသမီးတွေအသားအရည်ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် သူ့ကိုပဲအားကိုးနေရတယ်။ နေ့စဉ်လိမ်းပေးဖို့တော့ လိုတာပေါ့နော်။ Read more Hide
This colored day treatment brings both moisturization andahealthy-look effect. Formulated from Hyaluronic Acid, Hyper-protein and tensor complex, Vitamins A, E, C and B5, the treatment brings all the necessary elements to restore and to strengthen skin
Regenerating Smoothing Treatment LE SOIN TEINTE
Specifications of Regenerating Smoothing Treatment LE SOIN TEINTE